दिल्लीमा बढ्दो प्रदूषण बारे एम्सका निर्देशक डा. गुलेरियाको चेतावनी - कोरोनाका केसहरू बढ्न सक्छन् - Singhadurbarnews
दिल्लीमा बढ्दो प्रदूषण बारे एम्सका निर्देशक डा. गुलेरियाको चेतावनी – कोरोनाका केसहरू बढ्न सक्छन्
दिल्लीमा प्रदूषणको अवस्था झनै बिग्रँदै गएको छ । हावा यति विषाक्त छ कि सास फेर्न समेत गाह्रो भएको छ। अब यहिँ खतराको बीचमा एम्सका निर्देशक रणदीप गुलेरियाले ठूलो चेतावनी दिएका छन् । उनले दिल्लीमा बढ्दो प्रदूषणले कोरोनाका केस पनि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।
–दिल्लीमा प्रदूषण उच्च, गुलेरिया चेतावनी
इन्डियन मिडियासँगकाे कुराकानीमा गुलेरियाले जहाँ प्रदुषण बढी हुन्छ, त्यहाँ कोरोना बढी घातक पनि हुनसक्ने बताए । यसका कारण फोक्सोमा पनि सूजन आउन सक्छ । गुलेरियाले प्रदूषणका कारण कोरोना भाइरस लामो समयसम्म हावामा रहन सक्ने समेत जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा राजधानीमा केस बढ्ने डर छ ।
-कसरी बढ्यो प्रदूषण ?
यी सबै बाहेक रणदीप गुलेरियाले प्रदूषणका कारण दिल्लीमा मानिसको जीवन छोटो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरु सानै उमेरमा खतरनाक रोगको सिकार भइरहेका छन् । एम्सका निर्देशकका अनुसार चुरोटको धुवाँले नहुनेभन्दा बढी प्रदूषण निम्त्याइरहेको छ । यसका साथै चाडपर्वको समयमा सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ । यसले पनि दिल्लीको हावालाई विषाक्त बनाएको गुलेरियाको विश्वास छ ।
केही रिपोर्टमा दीपावलीको पटाकाले हावालाई विषाक्त नगरेको बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा पटाका बन्द गर्नुको कुनै अर्थ थिएन्। तर गुलेरियाले दिल्लीको यो अवस्थाका लागि केही हदसम्म दीपावली पनि जिम्मेवार भएको दाबी गरेका छन् ।
अहिले वातावरणविद् विमलेन्दु झाले पनि भनेका छन्, ‘वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी १५ लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ । एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि दिल्ली-एनसीआरमा बस्ने मानिसहरूले वायु प्रदूषणका कारण आफ्नो जीवनको ९.५ वर्ष गुमाउँछन् । फोक्सो केयर फाउन्डेसनले वायु प्रदूषणका कारण प्रत्येक तेस्रो बच्चामा दम हुने गरेको बताएको छ ।
वि.सं.२०७८ कात्तिक २० शनिवार १९:१८
काेभिड -१९ अपडेट : १३९ संक्रमित थपिए ,थप १ काे मृत्यु